Moments leh saaxiibo 8
Miyuu Christmas leeyahay wax macne gaar ah u ah aosophist, iyo haddii ay sidaas tahay, maxaa?
Macnaha ay kirismaska ​​u leedahay aosofistu waxay ku xiran tahay wax badan oo ku saabsan caqiidadiisa ama diintiisa. Tafatirayaashu maaha kuwa ka reeban kuwa caqli-gal ah, weli way dhimanayaan. Salafiyiinta, oo ah in la yidhaahdo, xubno ka tirsan Jaaliyadaha Tacliinta, waxay ka mid yihiin quruun kasta, jinsiyad iyo caqiido. Sidaas awgeed waxay ku xiran tahay sida ay u saameyn karto waxyaabaha xun ee ku-oolka ah ee qaaska ah. Waxaa jira dad tiro yar, si kastaba ha ahaatee, fikraddooda lama ballaariyo fahamka caqiidooyinka muusikada. Cibraaniga wuxuu fahamsan yahay Masiixa iyo Masiixiyadda iftiin badan oo ka badan ka hor inta uusan noqonin muusikada. Sidoo kale Masiixiyiintu, iyo kuwa kale oo dhan ee jinsiyad kasta iyo caqiido. Ereyga gaarka ah ee ku xiran Christmas-ka ee masruufaha ayaa ah in Masiixu yahay mabda' halkii uu ka ahaan lahaa qof, mabda'a ka fekeraya fekerka ka soo jeeda farqiga weyn ee xagjirnimada, wuxuu dadka ku soo dhaweynayaa taabashada nafta ragana isaga oo raacaya mabda'a jacaylka iyo xigmadda rabbaaniga ah. Qorraxdu waa calaamadda iftiinka runta ah. Qorraxdu waxay u gudubtaa calaamadda xornimada maalinta 21st ee Diisambar dhammaadka koonfurta koonfurta. Kadibna waxaa jira seddex maalmood marka aysan jirin korodhka dhererkooda, kadibna maalinta 25th ee bisha Diisambar wuxuu bilaabmaa koonfurta waqooyiga, sidaas darteedna waxaa la yiraahdaa inuu ku dhashay. Dadkii hore waxay u dabaaldegeen munaasabaddan oo ay farxad galiyeen, iyagoo ogaaday in ay soo ifbaxday qoraxda jiilaalka xilliga qaboobaha, miraha waxaa lagu naqshadeeynayaa raajada iftiinka iyo in dhulka hoos yimaada qorraxdu ay soo saari doonto miro. Taageeruhu wuxuu u jeedaa Christmas ka soo horjeeda badan: sida dhalashada qorraxda ee xornimada saxiixa, taas oo khuseeya adduunka jir ahaaneed; Dhinaca kale, dareenka runta ah waa dhalashada qorraxda aan la arki karin, Masiixa Aasaaskiisa. Masiixa, sida mabda'a, waa in uu dhasho gudahood nin, haddii ay dhacdo in ninka laga badbaadiyo dembiga jaahilnimada kaas oo keena dhimashada, iyo waa inuu billaabaa mudada noloshu keento dhimashadiisa.
Miyuu suurtagal noqon karaa in Ciise yahay qof dhab ah, iyo in uu ku dhashay on Christmas Day?
Waxay ka badan tahay suuragalnimada in qaar ka mid ah u muuqday, haddii magaciisu ahaa Ciise ama Apollonius, ama magac kale. Xaqiiqda joogitaanka adduunyada malaayiin qof oo isugu yeeraya Masiixiyiintu waxay markhaati u yihiin xaqiiqda, in ay jiri lahayd qof baray runta weyn - sida kuwa ku jira Mawduuca Buurta-oo lagu magacaabo Christian caqiido.
Haddii Ciise ahaa nin dhab ah sababta maxay tahay inaanan haysan wax taariikh ah taariikhda dhalashada ama noloshii nin sida nooca bible ah?
Waa run in aan haysan rikoor taariikheed mid ka mid ah dhalashada Ciise ama noloshiisa. Xitaa tixraaca Josephus ee Ciise ayaa sheegay in masuuliyiinta in ay ahaayeen isweydiin. Maqnaanshaha diiwaanka noocaas ah waa mid yar oo muhim ah marka la barbar dhigo xaqiiqda ah in baro barasho ah lagu soo ururiyey dabeecad, haddii ay tahay ama aysan ahayn dabeecad fican ama dhab ah. Waxbaristu waxay jirtaa oo mid ka mid ah diimaha ugu weyn ee aduunka ayaa marqaati u ah dabeecadda. Sannadkii xaqiiqada ahaa ee uu Ciise ku dhashay, xitaa maaha fiqi ahaan ugu fiicnayd fiqi ahaan. "Hay'adaha" waa ay diidan yihiin. Qaar waxay yidhaahdaan waxay ahayd ka hor AD 1; Qaar kale waxay ku andacoodaan in ay ahayd waqti dambe sida AD 6. Inkastoo hay'adaha dawladdu ay sii wadi doonaan wakhtiga hadda la aqoonsan yahay jadwalka Julian. Ciise waxa laga yaabaa inuu ahaa nin dhab ah oo weli aan la garanayn dadka oo dhan, inta uu noolyahay. Ujeedada waxa weeye in Ciise yahay macallin wax baray qaar ka mid ah kuwa ardayga noqday, ardaydu waxay heleen waxbaridkiisa oo waxay wacdiyeen waxbarashadiisa. Macallimiintu inta badan waxay isugu yimaadaan ragga, laakiin way adagtahay in la ogaado adduunka. Waxay doortaan sida kuwa ugu haboon inay helaan caqiidooyinka cusub ee gaboobay oo iyaga wax bara, laakiin ha isu galaan adduunka oo ay baraan. Hadday sidaas tahay kiiska Ciise waxa ay xisaabtami doontaa taariikhyahanadii aan waqtigaas ogeyn.
Maxay ugu yeeraan tan, 25th ee Diisambar, Kirismaska ​​halkii Ciisemass ama Ciise Maalin, ama Magacyo kale?
Ilaa qarnigii afraad ama qarnigii shanaad wuxuu ahaa magaca Christmas-ka ee la siiyay xafladihii lagu qabtay 25th ee Diseembar. Christmas-ka micnaheedu waa xaddiga Masiixa, ballan loo qabtay, ama Masiixa. Sidaa daraadeed ereyga ugu haboon wuxuu noqon lahaa Ciise-mass, sababtoo ah adeegyada la qabtay iyo xafladaha loo yaqaan "mass" oo lagu qabtay subaxdii 25th ee Diisambar waxay ahayd Ciise, ilmaha yar dhashay. Tan waxaa soo raacay farxad weyn oo dad ah, kuwaas oo gubay Yule ee qadarinta ilaha dabka iyo iftiinka; oo dhir udgoon leh, oo xajiya waxyaalihii ay u doogeen mooyaane. oo ku wareegay hareeraha miisaanka (iyo kuwa had iyo jeer ku noqda qaylinaya sidaas) taas oo calaamad u ah mabda'a nolol-bixinta qorraxda, oo ballanqaaday burburka barafka, daadadka webiyada, iyo bilowga soodhaha geedaha guga. Geedka Christmas-ka iyo soo-baxyada ayaa loo isticmaalay balanqaadkii cusbooneysiinta dhirta, iyo hadiyadaha ayaa badiyaa is-beddelay, betokening dareenka wanaagsan ee dhammaan.
Ma jiraa qaab habboon oo lagu fahmo dhalashada iyo nolosha Ciise?
Waxaa jira, oo waxay u muuqan doontaa midka ugu macquulsan qofkasta oo tixgelin doona iyada oo aan caqli gal ahayn. Dhalashada, nolosha, iskutallaabta, iyo sarakicidda Ciise ayaa ka dhigan habka loo marayo nafta qof kasta oo ka soo baxa nolosha iyo kuwa noloshooda ku noolaanaya dhimashada. Barista kaniisadda ku saabsan taariikhda Ciise ayaa ka fogaanaysa runta isaga ku saabsan. Tarjumaadda aosofiyada ee sheekada kitaabiga ah ayaa halkan lagu bixiyey. Maryan waa jireed jireed. Ereyga Maryan ayaa la mid ah qaar badan oo ka mid ah nidaamyada diimeed ee weyn, kuwaas oo ku andacoon jirey ilaahyo asal ah. Ereyga wuxuu ka yimid Mara, Mare, Mari, iyo dhammaanteed oo macnaheedu yahay qadhaadh, badda, fowdo, ficil weyn. Tani waa jidh kasta oo aadanaha ah. Dhaqanka Yuhuudda wakhtigaas, qaarna weli waxay qabtaan ilaa maanta, waxay ahayd in Masiixu yimaado. Waxaa la sheegay in Masiixa uu ahaa inuu ku dhashay bikrad ah hab aan caadi ahayn. Tani waa wax aan macquul ahayn marka laga eego arimaha jinsiga, laakiin si qumman u ilaalinta runta jimicsiga. Xaqiiqadu waxay tahay marka jidhka bini-aadmiga si fiican loo tababbaray oo loo kobciyo, wuxuu noqonayaa mid saafi ah, bikrad ah, daahir, nadiif ah. Marka jidhka bini-aadamku uu gaaro heer nadiif ah oo uu nadiif yahay, waa markaa waxa la yidhaahdaa Mary, gabadh bikrad ah, oo diyaar u ah inay uur yeelato. Rummaanida macneheedu waxa weeye in ilaah qof ahaaneed, maslaxadda rabbaaniga ah, uu jajabiyey jidhka kaas oo noqday bikrad. Fahamkan ama ra'yigani wuxuu ka kooban yahay iftiiminta maskaxda, taas oo ah ra'yigeeda koowaad ee dhabta ah ee dhimashada iyo ilaahnimada. Tani maaha mid muuqaal ah, laakiin macno ahaan. Dhab ahaantii run ahaantii waa run. Nadiifinta jidhka waa la dayactiray, halkaas oo noloshiisa cusubi ku bilaabmaysaa foomka aadanaha. Noloshan cusub ayaa si tartiib tartiib ah u kobcisa, iyo foom cusub ayaa loo yaqaannaa. waxaa uuraysatay Ruuxa Quduuska ah, iftiinka maskaxda, oo ka dhashay Maryan oo bikra ah, jidhkeeda jireed. Sidii uu Ciise u gudubtay sanadii hore ee qarsoodiga ah, waa in sidaas oo kale noqotaa qarsoodi. Kanu waa jidhka Ciise, ama kan u yimaada inuu badbaadiyo. Jidhkani, jidhka Ciise, waa jidhka dhimashada. Ciise ayaa la sheegay in uu u yimid inuu badbaadiyo dunida. Sidaas ayuu sameeyo. Jidhka Ciise ma dhimanayo sida jidhka, iyo wixii miyir-qabka ahaa ee jidh ahaaneed loo wareejiyay jidhka cusub, jirka Ciise, kaas oo ka badbaadiya dhimashada. Jidhka Ciise waa mid aan la dhiman oo mid ka helay Ciise, ama cidda Ciise u yimid, mar dambe ma jebin ama kaftamaan xusuustiisa, maaddaama uu markaas si joogto ah u socdo xaalad kasta iyo xaalad kasta. Waxa uu ku jiraa xasilloonida illaa cimilada, habeenkii, dhimashada, iyo nolosha mustaqbalka.
Waxaad Masiixa ka hadashay mabda'a. Ma waxaad kala saari kartaa Ciise iyo Masiixa?
Waxaa jira farqi u dhaxeeya labada eray iyo wixii loogu talagalay inay metelaan. Ereyga "Ciise" waxaa loo adeegsaday magaca sharafta iyo in la siiyo qofkii u qalmay. Waxaan tusnay waxa macnaha Ereyga ah ee Ciise uu yahay. Haddaba ereyga "Masiixa," waxa uu ka yimid Giriigga "Chrestos," ama "Christos." Waxaa jira farqi u dhaxeeya Chrestos iyo Christos. Chrestos wuxuu ahaa neophyte ama xertiis oo ku jiray tijaabo, iyo markii la isku dayey in uu u diyaargaroobo inuu iskutallaab ku samaysto, waxa loo yaqaan Chrestos. Ka dib markii uu bilaabay isaga wuxuu la subkay oo loo yaqaan 'Christos, kan subkay. Sidaas darteed mid ka mid ah oo ku dhex maray dhammaan tijaabooyinka iyo bilaabitaanka iyo helitaanka aqoonta ama midnimada Ilaah waxa la odhan jiray "a" ama "Christos". Tani waxay khuseysaa qofkii ku saabsan mabda'a Masiixa; laakiin Masiixa ama Masiixa iyada oo aan maqaalkan qeexan waa mabda'a Masiixa oo aan shakhsiyan ahayn. Sida la xidhiidha magaca Ciise, Masiixa, macneheedu waxa weeye mabda'a Masiixu wuxuu ku dhex shaqeeyay ama la qaaday xaruunta Ciise, jidhkana Ciise ayaa markaas loogu yeeray Ciise Masiix inuu muujiyo in kii dhintay uusan dhiman jidhka Ciise ma aha oo kaliya maaha mid aan dhimanayn shakhsi ahaan, laakiin sidoo kale wuxuu ahaa sidoo kale naxariis, Ilaah la mid ah, rabbaani. Sida Ciise taariikhiga ah, waxaanu xusuusnaan doonaa in Ciise aan loogu yeerin Masiix ilaa uu la baabtiisay. Markii uu ka soo degay Webiga Jordan waxaa la sheegay in ruuxu ku soo degay isaga oo codkiisa samada ka yimid wuxuu yiri: "Tani waa wiilkayga aan jeclahay, oo aan ku faraxsanahay" ka dibna dabadeedna Ciise ayaa loogu yeedhay Ciise Masiix, ama Ciise Masiix, oo macneheedu yahay ninkii Ilaah ama kan Ilaah. Qof kasta oo aadanaha ah wuxuu noqon karaa Masiixa isagoo iskudubaynaya mabda'a Masiixa, laakiin ka hor intaanay ururku imaanin, waa in uu lahaa dhalasho labaad. Si aad u isticmaasho erayada Ciise, "waa in aad mar kale dhalataan inta aad dhaxli laheyd boqortooyada jannada." Tani waa in la yiraahdo, jirkiisa jir ahaaneed ma ahayn in uu dib u dhigo ilmo, laakiin in uu, sida aadanaha, waa in uu dhasho sida dhimashada aan ka imanaynin ama jirkiisa jidhkiisa, iyo in dhalashadaasi ay noqon doonto dhalashada Ciise, Ciise. Markaa waxaa suurta gal ah in uu dhaxli karo boqortooyadii samada, inkasta oo suurtogal ah in Ciise lagu dhex abuuro jidh bikrad ah, suurtogal maahan in mabda'a Masiixu yahay mid la abuuray, sida ay uga fog tahay jidhka iyo u baahan yahay jirka si aad u sare u kacay ama loo horumariyey si loo muujiyo. Sidaas daraadeed waa lagama maarmaan in la lahaado jidhka aan dhimanayn ee loo yaqaan Ciise ama magac kale oo lagu hormariyay Masiixa sida Logos, Erayga, wuxuu muujin karaa nin. Waa la xusuustaa in Bawlos uu ku dhiirrigeliyay asxaabtiisa iyo xertiisa in ay shaqeeyaan oo ay tukadaan ilaa Masiixa laga dhex abuuro.
Sababta nooca gaarka ah ee loo xushay ayaa ah inay u dabaaldegto maalinta 25th ee bisha Diseembar iyadoo ah tan dhalashada Ciise?
Sababta ayaa ah in ay tahay xilliga dabiiciga ah oo lagu dabaali karo waqti kale; haddii laga soo qaado arin asal ah, ama dhalashada taariikhda bini'aadamka ee bini'aadamka, ama dhalashada jir aan dhimanayn, taariikhdu waa inay ahaataa maalinta 25th ee Diisambar, ama marka qorraxdu ay u gudubto xayeysiinta. Waayayaashu si wanaagsan ayey u garanayeen tan, waxayna u dabaaldegeen maalmaha dhalashada ee badbaadadooda ama ku saabsan 25th ee Diseembar. Masriyiintu waxay u dabaaldegeen maalinta dhalashada Horus ee maalinta 25th ee Diisambar; Faaris ayaa u dabaaldegay dhalashadii Mithras maalintii 25th ee Diseembar; Roomaanku waxay u dabaaldegeen Saturnalia, ama da 'dahab ah, maalinta 25th ee Diseembar, taariikhdaasna qorraxdu way dhalatay waxayna ahayd wiilka qorraxda aan la arki karin; ama, sida ay sheegeen, "waxay u dhintaan natalis, qashqashaad, qallayl." ama dhalashada qoraxda aan dhalan. Xidhiidhka Ciise Masiixa waxaa loo yaqaanaa taariikhda la sheeganayo iyo ifafaalaha qoraxda, maxaa yeelay, isagu, Ciise, wuxuu ku dhashay 25th ee Diseembar, taas oo ah maalinta qorraxda uu ka bilaabmayo safarkiisa waqooyiga ee calaamada madaxnimada, bilowga Xiliga qaboobaha; laakiin ma ahan ilaa uu ka soo wareego ciriiriga caleenta calaamad muujinaysa in uu sheegay in uu helay awoodiisa iyo awooddiisa. Haddaba quruumaha hore u gabay waxay gabyi doonaan heesaha farxad iyo ammaan. Waa waqtigan in Ciise uu noqdo Masiixa. Isagu wuxuu ka soo sara kiciyaa kuwii dhintay, wuxuuna la mid yahay ilaahiisa. Tani waa sababta aan ugu dabbaaldegeyno dhalashadii Ciise, iyo sababta ay "bani-aadiinta" u dabaaldegeen dhalashadii ay ka soo jeedeen maalinta 25th ee Diseembar.
Haddii ay suurtogal tahay in bini aadamku noqdo Masiixa, sidee loo qabtaa iyo sidee ku xiran tahay maalinta 25th ee Diisambar?
Si loo midoobo guryaha reerka Masiixiga ee ereyga ah sida caddayntu waxay u egtahay inay u egtahay in la jilicsanayo; in ardayga lagu yaqaan diinta iyo falsafada uma muuqdaan wax aan macquul ahayn; iyo saynisyahannada, ugu yaraan dhammaantood, waa inay tixgeliyaan wax aan macquul aheyn, sababtoo ah waa arrin ka mid ah horumar. Dhalashada Ciise, dhalashada labaad, waxay ku xiran tahay 25th ee Diisambar sababo badan, kuwaas oo ah kuwaas oo ah in jidhka bini'aadamka lagu dhisay isla mabda'a ah sida dhulka oo wuxuu waafaqsan yahay isla sharciyada. Dhulka iyo jidhkuba labadaba waafaqsan yihiin qaynuunka qorraxda. Maalinta 25th ee Diisambar, ama marka qorraxdu ay soo gasho calaamadda xayawaanka, jirka bani'aadamnimada, taas oo bixisay wax walba oo tababar ah iyo horumarin hore ah, ayaa ugu habboon munaasabaddan oo kale. Diyaargarowgii hore ee lagama maarmaanka u ahaa waa in noloshu ay tahay in la noolaado, iyo in maskaxdu ay noqoto mid si fiican loo tababbaray oo xirfad leh, oo awood u leh inay sii wado shaqo kasta muddo dheer. Nafaqada nadiifka ah, jidhka maskaxda, rabitaanka la xakameeyey iyo maskaxda xooggan ayaa u suurtageliya waxa loo yaqaano farcanka Masiixa inuu xidid ku yeesho ciidda bikradaha ah ee jidhka, iyo jidhka gudniinka si loo dhiso jirka jirka ee gudaha - dabeecadda. Halka sidan loo sameeyay geeddi socodka lagama maarmaanka u ah ayaa loo soo maray. Waqtiga imaatay, xafladda ayaa dhacday, markii ugu horreyseyna jidhkii dhiman lahaa oo muddo dheer ku jirey jiritaanka jidhka jidhka markii ugu danbeysay ee uu jirey jidhka jirka oo uu ku dhashay. Jidhkani, oo la yiraahdo jidhka Ciise, ma aha jidhka circa ama linga sharira oo uu ka hadlayay qoomiyadaha, mana aha mid ka mid ah mida jirka ka muuqda meelaha ama meelaha la isticmaalo. Waxaa jira sababo badan oo tan, kuwaas oo ay ka mid yihiin linga sharira ama jirka jirku ku xidhan yahay jidhka jidhka, xadhig ama xarig xuddunta ah, halka jirku aanu ku dhicin. Linga sharira ama jidhka dhexe ee dhexdhexaadintu waa mid aan caqli lahayn, halka Ciise ama jidhka aan dhimanayn uusan ahayn mid keliya oo kala duwan oo jirka ka muuqda, laakiin waa mid caqli badan oo awood leh waana mid miyir leh oo caqli leh. Marnaba ma joojiso miyir beelid, mana jirto wax jebin ah nolosha ama nolosha nolosha ama farqiga u dhaxeeya xasuusta. Nidaamyada lagama maarmaanka u ah helitaanka nolosha iyo helitaanka dhalashada labaad waxay la socdaan xudduudaha iyo mabaadiida jodiga, laakiin faahfaahintu aad ayay u dheer yihiin mana la siin karo halkan.